Chelsea oo wadahadalo heshiis kordhin ah la furaysa laba xiddig oo kooxda 1-aad ah
Home Horyaalka Ingiriiska Chelsea oo wadahadalo heshiis kordhin ah la furaysa laba xiddig oo kooxda...
Chelsea ayaa lagu soo waramayaa inay wadahadalo la furtay inay qandaraaska u kordhiso Jorginho iyo Thiago Silva si ay u aragto inay labada xiddig u balan qaadayaan 2025 iyo 2023, siday u kala horreeyaan.
Jorginho, oo 29 jir ah, waxaa markiisii ​​hore Napoli kala soo saxiixday tababarihiisii ​​hore ee Blues Maurizio Sarri sanadkii 2018, waxaana tan iyo markaas uu ciyaaray 117 kulan, tartamada oo dhan.
Labada xiddig oo si weyn u ciyaaray tan iyo markii ay yimaadeen caasimada dalka ayaa lagu soo waramayaa inay qarka u saaran yihiin inay saxiixaan heshiisyo cusub.
Maamulaha cusub ee Thomas Tuchel, oo xiriir wada shaqeyn dheer la leh Silva ayaa lagu xantaa inuu taageere weyn u yahay Joringho sidoo kale.
Sida uu sheegayo dhawaanahan wariyaha TV-ga Sport Italia Gianluigi Longari labadan ayaa lagu wadaa in loo soo bandhigo qandaraasyo cusub.
Si kastaba ha noqotee, isku day la doonayo in lagu dhiso koox adag oo isdaba joog ah, waxaa la fahamsan yahay in Jorginho loo soo bandhigi doono heshiis cusub ilaa 2025 iyo Silva heshiis cusub oo gaaraya illaa 2023.
Previous articleMaxaa kala socotaa Lix Xidig oo Weyn kuwaasi oo Liverpool uga maqan dhaawac iyo Waqtiga ay soo laabanayaan
Next articleLiverpool oo ku tartameysa adeega Kylian Mbappe.